Waxbarashada dadka waaweyn ee degmada (komvux) waxa loogu tala galay dadka waaweyn ee aan laheyn waxbarashada dugsiyada hoose/dhexe iyo sare. Komvux ayaad ku dhameystiran kartaa waxbarashadaadi hore ama waxad dooran kartaa inaad bilowdo jiho waxbarasho cusub. Laga bilaabo 1 juulaay sanadaka qofku buuxiyo 20 sano wuxuu bilaabi karaa inuu wax ka dhigto komvux.
Ujeedada imtixaanka ayaa ah in la ogaado aqoonta ardayga ee qeybaha kala duwan ee shuruudaha aqoonta maaddada ama kooraska. Sida loo fuliyo taa waxa goaan ka gaaro iskuulka. Sidoo kale iskuulka ayaa goaan ka gaara sida iyo goorta la sameynayo imtixaanka. Ardaygu isagu ma dooran karo inuu imtixaanka sameeyo waqti ugaar ah